China China Manufacturer အလူမီနီယမ် ဟာ့ဒ်ဝဲ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ Window and Door Weather Strip ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |JYD
တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သူ အလူမီနီယမ် ဟာ့ဒ်ဝဲ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပြတင်းပေါက်နှင့် တံခါး ရာသီဥတုဒဏ်ခံ
JYD သည် အနှစ် 20 လုံး ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော ကြိုးများကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် အထူးပြုပါသည်။အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုပံ့ပိုးပါ။
JYD သည် အရည်အသွေး အာမခံချက်ရှိသော သိုးမွှေးထိပ်တန်းစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အဓိကအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။အရည်အသွေးမြင့် သိုးမွှေးပျော့ပျောင်း plush ကို အသုံးပြု၍ အရည်အသွေးမြင့် PP polypropylene နှင့် polypropylene ခိုင်ခံ့သော ချည်မျှင်များကို အသုံးပြု၍ မျက်နှာပြင်နှင့် ထိတွေ့ရာတွင် ခြစ်ရာများ ကင်းစင်ပြီး တံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် သာမန်ထုတ်ကုန်များထက်5ဆ ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ပွတ်တိုက်မှုကို လျှော့ချရန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ထိရောက်မှုရှိသည်။Specifications နှင့် Color မျိုးစုံကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
1. အလူမီနီယံ/သစ်သား ပြတင်းပေါက်နှင့် တံခါးများအတွက် ရာသီဥတုဒဏ်ခံခြင်း။
2. ယက် polypropylene ချည်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။
3. အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး၊ အမြင့်များ၊ ကျောထောက်နောက်ခံအနံနှင့်အထူများရရှိနိုင်သည်။
4. ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ အင်းဆက်ပိုးမွှားဒဏ်ခံခြင်း၊ အသံဒဏ်ခံခြင်း၊
နမူနာ ရရှိနိုင်(နမူနာရယူရန် ကျွန်ုပ်ကိုနှိပ်ပါ)
ယခင်- Fins အမျိုးအစား (ဆီလီကွန်နှင့် ရေစိုခံ)
နောက်တစ်ခု: အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း 5*6/7*5/6*6 ရေစိုခံရာသီဥတုဒဏ်ခံ တံခါးရွက်ဖျံများ